Wakiilka Franck Kessie Oo U Sheegay Man United Iyo Barcelona Qaabka Lagu Heli Karo Xidigan
HomeWararka CiyaarahaWakiilka Franck Kessie oo u sheegay Man United iyo Barcelona Qaabka lagu heli karo Xidigan
Wakiilka xiddiga qadka dhexe ee AC Milan Franck Kessie ayaa soo jeediyay in macmiilkiisa uu si xor ah uga tagi doono San Siro haddii aysan kooxda Talyaanigu si weyn u hagaajin dalabka qandaraaskiisa.
Qandaraaska Kessie ee haatan ayaa ku eg bisha June ee soo socota, waxaana la sheegay in kooxo badan oo ay ku jiraan Manchester United iyo Barcelona la go’aamiyay inay la soo wareegaan xiddiga reer Ivory Coast.
Wakiilka 24-jirka George Atangana ayaa hadda daaha ka rogay in dalabka Milan uu xoogaa ka yar yahay mushaarkii ay filayeen, taasoo keeni karta in ciyaaryahanka khadka dhexe uu si xor ah uga tago.
“Ciyaaryahan muhiim ah wuxuu u baahan yahay qandaraas heerkiisa gaarsiisan. Waxaa jiray dalab rasmi ah oo kooxda ka yimid iyo codsi ka yimid wakiilka, laakiin waxaan ka hadlaynaa tirooyin aad uga fog waxa aad tilmaamayso [£ 6.5ma sanadkii] , ”Ayuu Atangana u sheegay Calciomercato .
Kessie – oo sidoo kale lala xiriirinayo Chelsea , Liverpool iyo Paris Saint -Germain – ayaa dhaliyay 30 gool wuxuuna diiwaan galiyay 15 caawin 191 kulan oo uu u saftay Milan tartamada oo dhan.